यस वर्षको मिस नेपालको ताज जोशीलाई, डा. सरिसा श्रेष्ठ मिस नेपाल अर्थ • Health News Nepal
यस वर्षको मिस नेपालको ताज जोशीलाई, डा. सरिसा श्रेष्ठ मिस नेपाल अर्थ
काठमाडौं, ४ असार २०७९
यस वर्षको मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि काठमाडौंकी प्रियंका रानी जोशीले पाएकी छिन्। सबै प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै जोशीले मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि जितेकी हुन्।
यस्तै डा. सरिसा श्रेष्ठ मिस नेपाल अर्थ बनेकी छिन् भने न्यान्सी खड्का मिस नेपाल इन्टरनेशनल घोषित भएकी छिन्।
डा श्रेष्ठले प्रतियोगितामा मिस कन्फिडेन्टको उपाधि पनि जितेकी छिन्। डा. श्रेष्ठले किष्ट मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस अध्ययन गरेकी हुन्। उनी यसअघि मिस नेवा ११३८ को फस्ट रनरअप भएकी थिइन्। यसका साथै लिडरसिप क्याम्पेन सम्बन्धित मिस रोट्रयाक्ट २०१९ मा पनि सफल भएकी थिइन्।
यसैगरी डा. गंगा गुरुङले फेस अफ फर्माइसको उपाधि जितेकी छिन्।
यस वर्षको प्रतियोगितामा ६ जना चिकित्सक प्रतिस्पर्धामा थिए। दिलाशा डोटेल, आयुशनोभा ढुंगाना, मेरिका बाँस्तोला, सरिशा श्रेष्ठ, यशस्वी श्रेष्ठ र गंगा गुरुङ चिकित्सक हुन्। ललितपुरको गोदावरीमा फाइनल प्रतियोगिता भएको थियो।
Tags: Corona Virus #Covid19Miss Nepal
५ देखि १२ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई फाइजर – बायोएनटेक खोप ९१ प्रतिशत प्रभावकारिता
डडेल्धुरा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सहकार्य समिति गठन
“डोनाल्ड ट्रम्पले भने जस्तो सजिलो छैन कोरोना भाइरस संग लडाईँ गर्न” #covid19
१० लाख भन्दा बढीले लगाए कोरोनाको बुस्टर डोज
कोरोना भाइरस (Covid-19) मा केमसानको भूमिका